Tuesday April 04, 2017 - 12:42:15 in Wararka by
Mid Kamida qaraxyada AMISOM lagula Beegsaday Sh.Hoose
Muddo laga joogo sideed maalmood, waxaa magaalada Muqdisho kasoo baxay kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo galbinayay saad loogu tala galay in la gaarsiiyo Baraawe, kuwaas oo aaney illaa iyo hadda u suura galin iney halkaasi gaaraan.
Ciidamada ayaa wata gaadiid casri ah oo u suura galin karaya iney saacado kooban isaga kala gooshaan Muqdisho iyo Baraawe, laakin sababta keentay in ay muddo toban maalmood ku dhow wadada ku jiraan ayaa waxay tahay weeraro culus oo uga imaanaya guutada qaraxyada ee Xarakada Al-Shabaab.
Gaarigii ugu horeeyay waxaa looga gubay inta u dhaxaysa Afgooye iyo Laanta buuro, kaas oo uu noociisu ahaa Taw, waxaana burburkiisa wehliyay iney dhimasho iyo dhaawac daran noqdeen askartii saarnayd.
Shisheeyaha ayaa muddo joogay halkaas, maadaama uu khasaare culus gaaray waxaana xusid mudan in markii ay dhaqaaqeen islamarkaana socdeen masaafo dhan 2 KM, laga gubay gaarigii labaad oo noociisu ahaa Xamuul.
Gaarigan oo sahay siday ayaa waxaa qabsaday qarax aad u xooggan, iyadoo ciidamada shisheeye ay danta ku kalliftay in ay isagoo holcaya kasii tagaan, waxaana ay habeenkaasi ku hoydeen Nambar 50.
Subixii xigay ayay soo dhaqaaqeen, hayeeshee marka ay marayaan qabuuraha Shalaambood ayaa waxaa mid kamid ah gaadiidkooda gaashaaman lala kiciyay qarax miino oo sababay inuu si dhameystiran u burburo.
Dorraad ayay halkaas kasii amba qaadeen socodkooda, iyagoo ku hoyday degaanka lagu magacaabo Danow, halkaasoo ay haddana maalintii shalay kasoo dhaqaaqeen, waxaana dhacday in gaari kale laga gubo markii ay wax yar dhaafeen tuulada cambareey, lana simanyihiin halka loo yaqaano Fidda dheer.
Gaariga laga gubay ayaa wuxuu noociisu ahaa kuwa xamuulka, kaas oo waliba kamid ahaa kuwii ay sida gaarka u ilaashanayeen maadaama uu saad siday, waxaana ay tani ka qaadeen caro xooggan iyagoo ku qamaamay tuulada, oo ay ku dileen laba qof oo ay ku jirto haweeney sagaashan sanno jir ah.
Ciidamada shisheeyaha ayaa xalay ku hoyday degaanka lagu magacaabo Marin gubaay, waxaana saaka aroortii qarax lagula beegsaday deegaan lagu magacaabo wareer maleh kadib markii ay soo dhaqaaqeen.
Intaa waxaa dheer in ay muddo saacado ah madaafiicda goobta ku garaacayeen dhulka hawdka ah.
Xaaladdan ayaa kusoo aadaysa iyadoo taliyaha ciidamada Mareykanka ee AFRICOM iyo gudoomiyaha midowga Afrika ay sheegeen in ciidamada shisheeye ku hor kufeen dagaalka ay kula jiraan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Si kastaba ha ahaato’e ciidamda shisheeye ayaa u muuqanaya kuwa ay si dhab ah u saameysay istaraatiijiyadda dagaal ee ay Shabaabku dajiyeen, waxaana muuqanaysa iney haatan marayaan marxaladdii u dambeysay, maadaama dagaalo qaaadaan iska dhaafe ay xataa ku adag tahay in ay saadka is gaarsiiyaan.